Kuratidza zvinyorwa neelebheri ungwandangwanda
Matongo eTrosky castle munguva yechando
Matongo enhare kuparara iri pamusoro pegomo rezita rimwe chete (488 m), mumusha Troskovice mudunhu Semily Liberec Dunhu. Iyo iri panharaunda yeBohemian Paradise Yakachengetedzwa Landscape Area pamwe neBohemian Paradise Geopark, iyo muna 2015 ndiyo yaive yekutanga yerudzi urwu kubva kuCzech Republic kuiswa muUNESCO yepasi rese geopark network. Imba iyi ndeye yeyenyika (inotungamirwa neNational Heritage Institute) uye yakavhurika kune veruzhinji.
Matongo eBrada castle
Brada kuparadzwa kwenhare, iko kuri pedyo nemusha weBrada mudunhu reJičín pachikomo chezita rimwe chetero. Kubva 1964 yanga ichichengetedzwa sechipembere chivimbo.
Aya ndiwo maduku mashoma eimba yakatangwa mu13. Makore emakore emhuri yeRonovec. Kutanga kutaurwa kwokutanga kwemazuva eimba kubva ku1258. Muna 1304, Mambo Václav Wenceslas akatora iyo imba. uye Brada yakazova chinhu cheumambo chokutsinhanisa mumusha weEttt. Inguva yakareba sei imba yakaramba iri mumaoko eumambo haisi pachena. 1371 akakunda imba yeVartemberk, 1434 akagara nhaka yake Machna z Veselé naHasek vanobva kuValdštejn. Mushure mekufa kwaHašek imba yakatorwa naMarkvart weLaboune, pakuguma kwe15. zana remakore rakange riri raMikuláš Licek weRýzmburk. Mune 1500, Brada inonzi inoparadzwa.
Munguva yePrissian-Austrian Hondo ya 1866 mauto eAustria akange aine imwe yenzvimbo dze artillery achidzivirira kupinda Jičín. Kurangarira Hondo yeJičín, muchindwe weouki ine zvifananidzo zveSt. Peter naSt. Pauro, vatsvene vaviri,…
Mufananidzo wepadenga weTrosky Bohemian Paradise
Matongo aya chiratidzo cheParadhiso yeBohemi uye imwe yeimba dzakashanyirirwa zvikuru muCzech Republic. Munzvimbo dzepamusoro dzechikomo pane nzvimbo yakachengetedzwa yechitubu chechisikigo Trosky. Gomo ndiro nhare ye Highlands. Kureba kwenzvimbo yakakwirira yeimba (Panna Tower) ndeye 514 mamita.
Imba yemukati yakavakwa pakati pemapipi maviri easalt flue, pane mapenga ayo asinga sviki akavakirwa shongwe. Kubva kumaodzanyemba imba yekutandarira yaichengetedzwa nenzvimbo inotsvedza, kuchamhembe nedamu. Pane yakadzika, yakawandisa masheti (kureba kwemamita makumi mana nemashanu) flue, yainzi Baba, yakasimudza zasi, pentagonal tower. Kumabvazuva, zvishoma…
Matongo eGothic castle Kumburk
Kumburk kuparadza kweGothic castle, anenge 6 km kumadokero kweNová Paka. Inowanikwa mune imwe yemakanongedzo ehusiku fungidziro inonzi Bohemian Paradise. Inowanikwa panzvimbo yakakwirira ye642 m asl mudunhu reSemily, pachikomo chezita rine zita rimwe chetero. Zvasara zvaro zvinodzivirirwa sechipembere chivimbo cheCzech Republic.
Iyo chivakwa chakavambwa mugore re1325 naMarkvart weVartemberk. Makore zana gare gare, mukati mehondo dzeHussite, yakaunzwa nemuridzi Hynek Krušina weLichtenburg, aive gavhuna weOrebite. Zvichida anga akavaka kunze masvingo. Mativi ega ega eimba yekuvakira akavakwa zvakapatsana nepamusoro peumwe neumwe.
Pashure pehondo dzevaHussite Jindřich Berka weDubá akawana chivakwa. Mushure make chivakwa chakatorwa nemhuri yeTrčka yeLípa nemhuri yekwaSmiřický. Mu16. Muzana ramakore rechi 19 chivakwa chakashandiswa sejeri. Munguva yeHondo Makumi Matatu Yehondo, akarwadziwa nemaSweden. Mugore 1658 yakabviswa pakuraira kwa Emperor Leopold I.
Nekuda kwengano dzinoverengeka dzekuparadza, mudetembi Karel Hynek Mácha vakashanya. Kune chikwangwani chechirangaridzo. Parizvino, chivakwa chinotungamirwa neMubatanidzwa we…
Matongo eVranov rock castle, Pantheon Malá Skála
Vranov (inozivikanwawo seSkála, Skála, Malá Skála kana Pantheon) kuparara kwenzvimbo yedombo kurudyi kurwizi rweJizera, yakamira pamusoro peNorth Bohemian musha weMalá Skála, mudunhu reJablonec nad Nisou. Kubva pakubvakacha kwedombo rekare meduval, iro raive iro rakakura kugadzirwa kwemhando dzaro munzvimbo dzeCzech nehurefu hwemamita mazana mana, kwasara vashoma chete ndivo vakachengetedzwa - vakafukidzwa nekuvakwa kwerudo kubva pakutanga kwezana ramakore re19. hunhu. Nezvemaonero ayo akanaka kubva pamawere, pamwe nenzvimbo dzine dutu rakazara (yakazara masitepisi, dzimba dzematombo, cellars, masuo akasiyana-siyana, maturu, nezvimwewo), Vranov inzvimbo yakakurumbira yekushanyira vashanyi munzvimbo yePPk Maloskalska.
Tsvakiridzo yezvokuchera matongo inoratidza kuvapo kwenhare yacho chete muzana ramakore rechigumi nemashanu, asi hazvigone kutongwa kuti mamwe emabwe emadziro akamira zvivakwa pamberi. Kupfuura zvese, musha weVranová wakatanga kutaurwa muna 15 kana yaive yemamongi eDominican muTurnov. Iyo nhare inogona kunge yakavakwa pakutanga…
Ndege yakapfurwa yeTrosky castle
Castle hunoparadza Trosky